प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सुनाए मोदी भ्रमणका १८ उपलब्धी ! के रैछन उपलब्धी विस्तृतमा पढ्नुहोस::kamananews
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सुनाए मोदी भ्रमणका १८ उपलब्धी ! के रैछन उपलब्धी विस्तृतमा पढ्नुहोस
३० वैशाख, २०७५ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण उपलब्धीपूर्ण र नेपालको पक्षमा भएको बताएका छन् ।
तीन वर्षअघि तनावपूर्ण रहेको दुई देशको सम्बन्ध अहिले नयाँ स्तरमा प्रवेश गरेको र बराबरीको हैसियतमा अगाडि लैजाने वातावरण बनेको बनाए ।
झण्डै एक घन्टा सम्बोधन गरेका उनले मोदी भ्रमणका उपब्लधीहरु सुनाए । साथै मोदीसँग भएको वार्तामा उठाएका तर, टुंगिन बाँकी रहेका विषयहरु पनि सुनाए ।
५. नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको विदेशमन्त्रीस्तरीय छिट्टै बस्छ । सम्बन्ध पुनरावलोकन र आर्थिक विकासको कार्ययोजना बनाउन यो बैठक महत्वपूर्ण हुनेछ ।
९. उर्जा ब्यापारका लागि ऊर्जा ब्यापार सम्झौता -पीटीए) भएको छ । त्यसविपरीत भारतले ५१ प्रतिशत आफ्नो लगानीको एकतर्फी प्रावधान राखेर नीति बनायो । हामीले भन्यौं, यो नेपालमा लगानी हतोत्साहित गर्ने र समहतिसँग बाझिने नीति उपयुक्त भएन र हटाउनुपर्छ । यसमा भारत सहमत भएको छ र पीटीए अनुसार नै हुने भएको छ ।
नेपालले उठाएका तर, नटुंगिएका विषय
९. मेडिकल शिक्षामा भारतीय विद्यार्थीहरुले नेपालमा पाएको जस्तो सुविधा हाम्रा विद्यार्थीहरुले भारतमा पनि पाउनुपर्छ भनेका छौं । सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले भारत मेडिकल काउन्सिलको डकुमेन्ट स्वीकार गर्ने तर, हाम्रो नमान्ने स्थिति छ । हामीले समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौं ।
७ जेठ,२०७५ काठमाडौं । रसियामा हुने विश्वकप फुटबलका लागि स्पेनले आफ्नो २३ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ । टोलीमा रियल मड्रिडका ६ जना खेलाडी परेका छन् । स्पेनको टोलीमा परेका सर्जियो रामोस, कार्भाजल, नाचो, इस्को...